Mkpesa Mara Mma nke Brazil Mkpesa Mara Mma nke Brazil
Brabil Deve Wave nke Bọọlụ - Mgbakwunye Ọkpụdọ Na-adịbeghị Anya
Mgbatị ntutu Mịnịstrị nke Brazil
Anyị Mgbatị Mgbapụ Mgbapụta Brazil bụ ihe mgbakwunye ntutu na - amaghị nwoke a na - agbanwebeghị. Nchịkọta ntutu isi mmadụ ọ bụla sitere n'aka ndị na-enye 1-2 ma họrọ ya maka ụdị ederede ya pụrụ iche. Ihe mgbakwunye ntutu isi ndị a dị na Brazil dị mma n'ihi ya, cuticles & ntutu isi dị ike! Ntutu isi ahụ ga-adịgide ihe dị ka afọ 2 site na nlekọta kwesịrị ekwesị.
Nlekọta dị nta, akụkọ, na nke na-ewu ewu, Mgbatị ntutu ntutu anyị nke ndị Brazil bụ ụdị ntutu anyị na-ewu ewu. Ọ dị mfe ịke, na-ejikwa agba agba nke ọma, ndị na-atụgharị maka ndị ahịa nwere ụdị ndụ dị gara gara na-atụ aro ya. Ihe curls na-enye aka na ikike ịba uru nku ume dị oke mma ma dịkwa mma n'ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ.